China Ọkara Obere Okpomọkụ Refrigeration Compressor emepụta na soplaya |Igwe oyi
Igwe nju oyi dị n'okpuru ala
Igwe nju oyi dị obere na-enye ike jụrụ oyi yana obere ume achọrọ yana emebere ya maka friji HFC, HFO na obere GWP.Nhọrọ nke VARISTEP n'ibu njikwa ikike na-enye oke arụ ọrụ nke ukwuu na ngwa ọkara na obere okpomọkụ.
Okpomọkụ:ogologo -10 ℃ ~ + 10 ℃
Ike Compressor:3.8-29 kW
Igwe nju oyi:R22 |R404A |R134a |R407F |R449A
26.8m³ / h
32.8m³ / h
34.7m³ / h
126.8m³ / h
18.6kw ~ 158kw
1. Iji gbochie oke mmalite nke ugbu a, ndị ahịa nwekwara ike ịhọrọ iwepụ ngwaọrụ mmalite.
2. Iji belata okpomọkụ nke ikuku iyuzucha, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ isi cylinder mmiri jụrụ oyi, isi cylinder mmiri mmiri na-ekpuchi mmiri, ndị ọzọ Fans ma ọ bụ ngwaọrụ eletriki mmiri mmiri (CIC system).
3. Nnukwu ike jụrụ oyi, ike nrụpụta ike (uru COP) bụ 20% dị elu karịa ụdị ndị ọzọ nke compressors.
4. Ọmarịcha arụmọrụ dị ala.N'ihi na R22 refrigerant, evaporation okpomọkụ nke otu-ogbo compressor nwere ike iru -40 ℃, refrigeration unit na-eji maka otutu refrigerant (R22, R134a, R404A, R507).
5. Nabata sub-coil ka ịmalite, belata mmalite mmalite ma belata mmetụta na grid ike.The moto e akpan akpan teknuzu paramita na ọhụrụ emepụtara ofu na rotor components, nke na-abawanye arụmọrụ na ike ihe.
6. Wide nso nke ngwa: compressors na-ekewa n'ime ọkara na elu okpomọkụ ụdị na obere okpomọkụ ụdị, elu okpomọkụ ụdị evaporation okpomọkụ nwere ike iru 12.5 ℃, obere okpomọkụ ụdị otu ogbo compressor evaporation okpomọkụ nwere ike iru (R22) -40 ℃, okpukpu abụọ ogbo. Compressor The evaporation okpomọkụ nwere ike iru (R22) -50 ℃.Ọ bụrụ na ejiri R404a ma ọ bụ R507, okpomọkụ evaporation ga-adị ala, ruo -70 ℃.
7. Ụdị valvụ pụrụ iche, arụmọrụ dị elu na nkwụsi ike, ogologo ndụ ọrụ.
8. Ihe nchekwa moto na-ebufe ihe n'ime ya na-echebe moto ahụ nke ọma site na oke ibu na ikpo ọkụ n'ihi ụbara ibu na usoro refrigeration ma ọ bụ ezughị ezu refrigerant nloghachi ikuku site na refrigeration usoro.
9. Oke ike iwu: 4-cylinder compressor ike regulation nso bụ 50%, 100%, 6-cylinder compressor ike ụkpụrụ bụ 33%, 66%, 100%.Mgbe ibu nke usoro refrigeration gbanwere, a na-eme mgbanwe dị mma iji belata ụgwọ ọrụ.
Nke gara aga: Igwe nju oyi maka ime ụlọ oyi
Osote: Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ / ikuku oyi Series DJ
4NCS-12.2-40P 12HP refrigeration kọmpat.
Nchekwa oyi ịghasa compressor
S6H-20.2 20HP mpio friji kọmpat abụọ
S6G-25.2 25HP COMPRESSOR REFRIGERATION ABỤỌ.